मानिसहरु जन्मजातै खराब हुन्छन् ? - Nayapul Online
काठमाण्डौँ – के अरुले भनेजस्तै मानिसहरु जन्मजातै खराब हुन्छन् ? वा उनीहरुलाई समाज वा परिवेशले खराब बनाउने गर्छ ?
यस विषयमा मनोबैज्ञानिकहरुले बषौर्ं देखि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । युनानी दार्शनिक अरस्तूले मानिसले नैतिकताको पाठ जीवनको अनुभवबाट हासिल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसो त विभिन्न उपन्यासहरुमा मानिसहरुको खराब प्रवृतिको बारेमा पनि वर्णन गरेको पाइन्छ । वि्रटेनकी राजनितिशास्त्री थोमस हाब्सले भनेका थिए, मानिस प्रवृत्ति जनावरको जस्तो हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न समाजको नीति नियमको आवश्यकता पर्छ ।
तथापी, मनोबैज्ञानिकहरुले हालैमा गरेको विभिन्न अनुसन्धानबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने मानिसहरु जन्मजात खराब हुँदैनन् । उनीहरुलाई खराब बनाउने भनेको समाजले हो । अन्यथा, कुनै बेलाका कुख्यात रत्नाकर डाकुपछि गएर महषिर् ऋषि कदापी हुँदैनथे होलान् ।
करिब एक वर्ष हाराहारीका बालबालिकाहरुलाई यो शो हेरेपछि उनीहरुको झुकाव कुन रङ्गको भूमिकामा थियो, भन्नेबारे अध्ययन गरिएको थियो । जसमा उनीहरुले आˆनो झुकाव पहेलो रङ्गको त्रिकोणतिर रहेको र त्यसैसित खेल्न चाहेको प्रतिकि्रया जनाएका थिए ।
त्यतिमात्र हैन, उक्त अनुसन्धानमा बालबालिकाको परोपकारलाई प्राथमिकता दिने गरेको पनि पाइएको थियो । हवार्ड विश्वविद्यालयले गरेको ‘विग मदर स्टडी’ले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।
यसको मतलव सिग्मण्ड र होब्स गलत थिए भन्ने पक्कै होइन । तथापी, यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने बालबालिका सानैदेखि परोपकारी र असल स्वभावका हुन्छन् ।
यद्यपी, आमाबाबुलाई यो निश्चित गर्न जरुरी छ कि उनीहरु गलत साथीसँगीको संगतमा नफसुन् । र, कुतलमा नलागुन् । किनकी मानिस जन्मजात जतिसुकै असल वा खराब भएपनि पछि गएर उनीहरुलाई असल वा खराब बनाउने भनेको समाज, र खराब प्रवृत्तिले नै हो । बीबीसी हिन्दीबाट
फेसबुकले मात्र लान्छ वर्षमा १३ अर्ब